Windows Package Manager: Kuedza kutsva kweMicrosoft kukwezva vamwe vashandisi veLinux | Linux Vakapindwa muropa
Windows Package Manager: Kuedza kutsva kweMicrosoft kukwezva vamwe vashandisi veLinux
Luis Lopez | | Zvirongwa, Windows
Microsoft yakazivisa mazuva mashoma apfuura iyo Windows Package Maneja, zano idzva iro vashandisi veLinux vanoziva kwazvo uye iro rinotarisira kuita kuisa zvirongwa zviri nyore.
Windows Package Manager chirongwa chitsva chakafuridzirwa nenyika yeLinux, ndosaka chakaziviswa panguva ye Microsoft Vaka, musangano wekuvandudza uyo wakaitwa mazuva mashoma apfuura.
Sezvo vazhinji vedu tinoziva, Microsoft inofarira kutevedzera zvimwe zvezvinhu zveLinux uye mushure mekuburitsa Windows Subsystem yeLinux, kusanganisira iyo yechipiri vhezheni iyo inosvika muna Chivabvu 2020 yekuvandudza, zvine musoro kuti ivo zvino vaburitsa pasuru maneja.
Uye ndeyekutenda kumaneja wepakeji unoitwa neMicrosoft Windows 10 unzwe kujairana nevashandisi veLinux uye izvi zvakakosha tichifunga kuti nharaunda yeLinux yakakura zvakanyanya nguva pfupi yadarika.
Nekutanga maneja wepakeji, Microsoft inojekesa kuti pane nzvimbo yemunhu wese mukati Windows 10, kusanganisira vashandisi veLinux.
Uye hapana mubvunzo kuti vashandisi veLinux vachada ichi chinhu chitsva, kunyanya avo vakaisa iyo diki system pane avo zvishandiso.
Mashandisiro ekushandisa Windows Package Manager
Vashandisi veLinux vanozoona kuti zviri nyore kwazvo kushandisa maneja wepakeji uye zvese zvinodzikira kumurairo wint, semuenzaniso, kuisa chirongwa chaunofanira kushandisa chete:
winget gadza zita reapp
Unogona kushandisa yese iyi yekuzvitsanangudza mirairo:
Iwo mafomu anogona kuiswa ne wint ivo vanofanirwa kutanga vagadziriswa nemaoko neMicrosoft. Ichi ndicho chikonzero chikuru nei Microsoft yakasarudza kugadzira yayo pacheji maneja uye isingashandisi chirongwa chakavhurika.
Parizvino, Windows Package Manager ichiri chiratidzo, izvo zvinoreva kuti ibasa riri kuenderera uye yekupedzisira vhezheni ichasvika gare gare.
Microsoft yatanga chirongwa ichi Windows Package Insider, iyo inonyanya kukubvumidza kuti uedze ichi chishandiso chitsva chisati chaenda kuruzhinji, unogona kunyorera chirongwa ichi pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » Windows Package Manager: Kuedza kutsva kweMicrosoft kukwezva vamwe vashandisi veLinux
Ino saiti inonzi linuxadictos kana windowsadictos?
- Uye nekutenda kumaneja wepakeji unoitwa neMicrosoft Windows 10 unzwe kujairana nevashandisi veLinux
- Nekutanga maneja wepakeji, Microsoft inojekesa kuti pane nzvimbo yemunhu wese mukati Windows 10, kusanganisira vashandisi veLinux.
- Uye hapana mubvunzo kuti vashandisi veLinux vachada ichi chinhu chitsva
Asi ndezvipi zvisina maturo izvi?
Anoshandisa linux anoisa kuburikidza neconsole haazomhanye kuisa yakaipa (https://es.thefreedictionary.com/nefasto) windows10 chaizvo nekuda kweizvozvo.
Yekupedzisira Windows yandakaedza yaive Windows Vista, uye chaizvo nekuda kweizvo zvandaisada, zvinova ndezvekuti zvishoma zvese zvaikubvunza mvumo.
Ehezve ini ndanga ndisiri kuzodzima zvese nezve izvo zvandisina kukubvunza, izvo zvakazove zvakapfuura izvo zvandakakumbira.
Ini ndinoenderera ne gentoo inoita chete zvandiri kuda, kana zvimwe kana zvishoma uye pamusoro pazvo inozviita nemazvo.
Ini handiise mashandiro ekuenzanisa pakati peangu gentoo uye iyo W10 yemwanasikana wangu laptop, nekuti inonyadzisa.
Pindura kune expobi
Kunyangwe ini ndisingabvumirane nedudziro yaLuis, ndinobvuma kuti isu tinofanirwa kushambadza chinyorwa ichi. Chero ani anoifarira Microsoft nhasi mutambi mukuru mune yakavhurika sosi yenyika. Muchokwadi, ndeimwe yeanonyanya kubatsira mukusimudzira kernel.
Etcher: iri nyore app yekugadzira midhiya midhiya
EA inovhura iyo yekuraira & Kunda kodhi kodhi